१९ आश्विन २०७५, शुक्रबार १५:२५१९ आश्विन २०७५, शुक्रबार १५:२५१९ आश्विन २०७५, शुक्रबार १५:२५ by महेश शर्माNo Comments
कुन देशका पुरुषको लिङ्ग कति लामो ? (२५ देशको सूचिसहित)
१९ आश्विन २०७५, शुक्रबार १५:२५ 05/10/2018 by महेश शर्मा
पुरुषको लिंगलाई लिएर विभित्र देशमा अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेका हुन्छन् । लिंगको आकार र प्रकारको विषयमा पनि विशेष चासो राखेको देखिन्छ । विशेष गरी यौन सन्तुष्टीमा लिंगको आकारले फरक पार्छ भन्ने भ्रम पनि फैलिरहेको पाइन्छ । लिंगको आकारले भने यौन जीवनलाई कुनै प्रभाव पार्दैन । तर पनि यसको आकारलाई लिएर
१५ आश्विन २०७५, सोमबार १७:२०१५ आश्विन २०७५, सोमबार १७:२०१५ आश्विन २०७५, सोमबार १७:२० by महेश शर्माNo Comments
यसरि चिन्न सकिन्छ दैनिक सेक्स गर्ने महिला !
१५ आश्विन २०७५, सोमबार १७:२० 01/10/2018 by महेश शर्मा
बिहे पछि एउटा नयाँ जिन्दगी सुरु हुन्छ । विशेष गरि बिहे पछि महिलाको जिन्दगीमा धेरै परिवर्तन आउँछ । उनीहरुको बोली चाली देखि हरेक कुरामा परिवर्तन आउँछ । पुरै जिन्दगी बदलिन्छ र यो समायोजन गर्न अलि समय पनि लाग्छ । साथै उनीहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छ । आखिर बिहेपछी किन यस्तो हुन्छ त ? उनीहरुको नितम्
१५ आश्विन २०७५, सोमबार १५:१०१५ आश्विन २०७५, सोमबार १५:१०१५ आश्विन २०७५, सोमबार १५:१० by महेश शर्माNo Comments
१४ वर्षका छोराको कोठामा अचानक पुगिन् आमा, भित्रको चलिरहेको थियो भयानक दृश्य !
१५ आश्विन २०७५, सोमबार १५:१० 01/10/2018 by महेश शर्मा
एजेन्सी। अमेरिकाको मेरील्याण्डकी एक महिलाको होसहवास त्यतिबेला उड्छ जब उनी आफ्नो १४ वर्षको छोराको कोठामा अचानक पुग्छिन् । कोठाभित्र निकै भयानक दृश्य चलिरहेको थियो । भित्रको दृश्य देख्नासाथ उनले आत्तिएरु पुलिस बोलाउँछिन् । पुलिसले उनको छोरालाई पक्राउ गरेर जेल पठाउँछ । यो घटनाले ती अभिभावकलाई सचेत बनाउ
१३ आश्विन २०७५, शनिबार १७:३९१३ आश्विन २०७५, शनिबार १७:३९१३ आश्विन २०७५, शनिबार १७:३९ by महेश शर्माNo Comments
योनि बाहिरी छाला किन कालो हुन्छ ? पढ्नुहोस् कारण यस्तो छ !
१३ आश्विन २०७५, शनिबार १७:३९ 29/09/2018 by महेश शर्मा
प्रायःजसो महिलाहरुको शरिरको छालाभन्दा योनिको बाहिरी छाला फरक हुन्छ । महिलाहरु आफ्नो शरीरको रङसँग योनी बाहिरको छाला किन कालो भएको होला भनेर सोच्ने गर्दछन् । योनीको छाला कालो हुनु र अन्य कुराहरुमा केही सम्बन्ध हुन्छ कि भन्ने उनीहरुको चासो हुन्छ । यौनसम्पर्क गरेर कालो भएको कतिपयले महिलाहरुको सोचाई ह
१३ आश्विन २०७५, शनिबार १२:२८१३ आश्विन २०७५, शनिबार १२:२८१३ आश्विन २०७५, शनिबार १२:२८ by महेश शर्माNo Comments
व्यस्त सडकमा कुकुरले मजाले कार चलाएपछि…, हेर्नुहोस् (भाइरल भिडियो) !
१३ आश्विन २०७५, शनिबार १२:२८ 29/09/2018 by महेश शर्मा
एजेन्सी। तपाइँले मानिसहरुलाई कारमा कुकुरलाई लिएर हिँडेको त देख्नुभएको होला । तर, कारमा मालिकलाई राखेर कुकुरले कार चलाएको देख्नुभएको छ । अहिले एउटा भिडियो भाइरल भइरहेको छ । यो भिडियोमा कार कुकुरले चलाइरहेको छ र मालिक छेउको सिटमा मजाले बसेका छन् । यो भिडियो मेघालयको राजधानी शिलोङको सबैभन्दा व्यस्त
१२ आश्विन २०७५, शुक्रबार १७:५३१२ आश्विन २०७५, शुक्रबार १७:५३१२ आश्विन २०७५, शुक्रबार १७:५३ by महेश शर्माNo Comments
पाइपको लाईन खन्दै गर्दा अचानक धातु रहेको घैंटो भेटिएपछि……..!
१२ आश्विन २०७५, शुक्रबार १७:५३ 28/09/2018 by महेश शर्मा
एजेन्सी । स्पेनको एक पार्कमा पाइप गाड्ने काम भइरहेको थियो । मजदुरहरु जमिन खन्दै थिए । यत्तिकैमा एक मजदुरले जमिन खन्दै गर्दा अनौठो आवाज आयो । यो कुनै कडा यस्तुमा ठोक्किएपछि आउने आवाज थियो । त्यसपछि मजदुरहरुले त्यहाँ खन्न थाले । खन्दै जाँदा त्यहाँ धातुका घैंटो भेटिए । घटा १–२ वटा होइन पूरै १९ वटा थ
१२ आश्विन २०७५, शुक्रबार १७:२५१२ आश्विन २०७५, शुक्रबार १७:२५१२ आश्विन २०७५, शुक्रबार १७:२५ by महेश शर्माNo Comments
कस्तो अचम्म: कारले किच्दा पनि केही नभएका यि बालक (भिडियाे)
१२ आश्विन २०७५, शुक्रबार १७:२५ 28/09/2018 by महेश शर्मा
मुम्बईको गोरेगाउँमा केही दिन पहिले एक महिलाले ८ बर्षीय बालकमाथि कार चढाईन् । तर यो एउटा यस्तो चमत्कारिक घटना हुन पुग्यो कि, जसमाथि मानिसहरुलाई विश्वास गर्न नै मुस्किल हुने गर्दछ । उक्त घटना सीसीटिभीमा कैद भएको छ । महिलाले बालकमाथि कार चढाएको भिडियो हालका दिनमा सोशल मिडियामा भाइरल भइरहेको छ । #Wat
१२ आश्विन २०७५, शुक्रबार १४:५०१२ आश्विन २०७५, शुक्रबार १४:५०१२ आश्विन २०७५, शुक्रबार १४:५० by महेश शर्माNo Comments
यस्तो परम्परा जहाँ महिलाले सात जना परपुरषसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्नैपर्ने !
१२ आश्विन २०७५, शुक्रबार १४:५० 28/09/2018 by महेश शर्मा
एजेन्सी। हाम्रो समाजिक संस्कार र मान्यता अनुसार जो स्त्री आफ्नो पति बाहेक अन्य पुरुषका बारेमा सोच्दैनन् त्यस्ता स्त्रीमाथ भगवानको कृपा हुन्छ। तर यही धर्तीमा एउटा यस्तो पनि मान्यता छ जहाँ एक स्त्रीले एक भन्दा धेरै पुरुषसँग सम्बन्ध बनायो भने भगवानले आशीर्वाद दिन्छन्। त्यो पनि एक पटक मात्र होइन सात पटक
७ आश्विन २०७५, आईतवार ०८:०४७ आश्विन २०७५, आईतवार ०८:०४७ आश्विन २०७५, आईतवार ०८:०४ by महेश शर्माNo Comments
सरकारको निर्देशनपछी बन्द होलान त ‘पोर्न साइट’हरु ?
७ आश्विन २०७५, आईतवार ०८:०४ 23/09/2018 by महेश शर्मा
काठमाडौँ — सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले ‘पोर्न साइट’ बन्द गराउने भएको छ । मन्त्रालयले यस्ता वेबसाइट बन्द गराउन दूरसञ्चार प्राधिकणलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरण नेपालमा इन्टरनेट र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको नियमनकारी निकाय हो । अश्लील सामग्रीमा इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने पहुँचमा रोक लगाउन व
३ आश्विन २०७५, बुधबार १६:१७३ आश्विन २०७५, बुधबार १६:१७३ आश्विन २०७५, बुधबार १६:१७ by महेश शर्माNo Comments
किन कालो हुन्छ महिलाको योनी, यस्तो रैछ खास कारण !
३ आश्विन २०७५, बुधबार १६:१७ 19/09/2018 by महेश शर्मा
महिलाहरुको योनि किन कालो हुन्छ ? धेरै यौन सम्पर्क गरेर होत ? जानी राखौ योनिको बाहिरी छाला किन कालो भएको ? सबैको यस्तै हुन्छ ? त्यो के कारणले भएको हो ? धेरै यौनसम्पर्कले गरे कालो हुन्छ भन्छन्। के यो सत्य हो ? यस्तो कालोपन हटाउन के गर्नुपर्ला ? योनिको बाहिरी भाग के हो ? महिलामा प्रत्यक्ष रूपमा योनिलाई
मलेसिया बिरुद्धको खेलमा सन्दिप एक्लैको ५ विकेट, सन्दिप चम्किएपछी नेपालले पायो यस्तो लक्ष्य
मध्यराति प्रहरी जुवा खालमा पुगेपछि भागदौड हुँदा दुई जनाको ज्यान गयो
मलेसिया र ब्याटिङ्गमा, सन्दीप एक्लैले लिए पाँच विकेट
सेमिफाइनलमा भारत माथी नेपाली चेलीको शानदार जित
आफ्नै ज्वाईले जेठानकी श्रीमती भागाएपछी ..